Football Khabar » सुपरकोपाको उपाधिका लागि आज युभेन्टस र लाजियो भिड्दै : कसले मार्ला बाजी ?
सुपरकोपाको उपाधिका लागि आज युभेन्टस र लाजियो भिड्दै : कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं, पुस ६
इटालीको कप फुटबल सुपरकोपा इटालियामा आज वर्ष २०१९ को उपाधि भिडन्त हुँदैछ । यस वर्ष युभेन्टस र लाजियो उपाधिका लागि भिड्दैछन् । सुपरकोपा हरेक वर्ष अघिल्लो सिजनको सिरी ए च्याम्पियन र कोपा इटालियाको रनर–अप टिमबीच खेलाइन्छ ।
यसपटक फाइनल खेल साउदी अरेबियामा हुँदैछ । खेल किङ साउद युनिभर्सिटी स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार आज राति १०ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ ।
युभेन्टस यो प्रतियोगिता सर्वाधिक ८ पटक जित्ने टिम हो । उसले गत वर्ष एसी मिलानलाई १–० ले हराएर उपाधि जितेको थियो । युभेन्टस आज लगातार दोस्रोपटक उपाधि जित्ने दाउमा छ ।
आज घरेलु लिगका दुई बलिया टिम उपाधिका लागि भिड्दा दुवै टोली चर्को दबाबमा हुनेछन् । जारी सिजन युभेन्टस र लाजियो दुवै उत्कृष्ट लयमा छन् ।
युभेन्टसलाई बदला लिने मौका
आज सुपरकोपाको उपाधिका लागि भिड्दा युभेन्टस लाजियोसँग बदला लिने दाउमा हुनेछ । गत साता सिरी ए मा युभेन्टसको १८ खेलसम्मको अपराजित यात्रामा लाजियोले नै पूर्णविराम लगाइदिएको थियो ।
सिजनभर सबैखाले प्रतियोगितामा १८ खेलम्म अपराजित रहेर १९औं खेल खेल्न लाजियोको घरमा उत्रेको युभेन्टस ३–१ ले स्तब्ध बनेको थियो । आज युभेन्टस कोपाको उपाधि भिडन्तमा लाजियोलाई हराएर सो हारको बदला लिने दाउमा छ ।
आज युभेन्टसको टोलीमा सबै प्रमुख खेलाडी उपलब्ध छन् । क्रिस्टियानो रोनाल्डो आजको खेलमा पनि केन्द्रमा हुनेछन् । पछिल्लो समय उत्कृष्ट लयमा देखिएका पोर्चुगज फरवार्ड आज पनि टिमका लागि योगदान दिन आतुर छन् । गत वर्ष युभेन्टसले यो उपाधि जित्दा रोनाल्डोले नै एक मात्रै विजयी गोल हानेका थिए ।
युभेन्टस वर्षको अन्तिम खेलमा उपाधि जितेर २०१९ लाई बिदा गर्ने दाउमा छ । आज सिजनको पहिलो उपाधि जित्न युभेन्टसले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यता, रोनाल्डोका लागि पनि आजको खेल निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । उनी नयाँ क्लबबाट आज तेस्रो उपाधि जित्ने दाउमा छन् ।
प्रकाशित मिति ६ पुष २०७६, आईतवार ०९:५४